Archive du 20170425
Claudine Razaimamonjy Hanao ampamoaka goavana ?
Fanodinkodinana volam-panjakana no hanenjehana an�i Claudine Razaimamonjy. Tafiditra ao ny fanjakana, indrindra fa ny minisiteran�ny atitany, tantanan�ny praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier, izay voatonona ho tompon�antoka tamin�ny fanomezana tsenam-panjakana azy.
Fanjakana Rajaonarimampianina Hitalaho amin�ny vondrona eoropeanina
Hotontosaina rahampitso alarobia 26 aprily any Antsiranana ny dinika politika hifanaovan�ny vondrona iraisam-pirenena sy ny governemanta Malagasy.
Rivo Rakotovao sy Riana Andriamandavy VII Nisitri-belona noho ny raharaha Claudine R ?
Tsy re feo sy toa nangina tanteraka ny filoha nasionalin�ny Antoko HVM, Rivo Rakotovao sy i Riana Andriamandavy VII, filoha lefitry ny antenimierandoholona.
Taratasin�i Jean Aiza izay Jeanine eo ?
Miarahaba an�i Jeanine tonga eto an-tanindrazana e ! Miarahaba an�i Jean koa nahatanteraka ny teny fampanantenany tamin�ny zoma. Dia inona moa fa aleo izahay hangina amin�izay e !
Mahery Tianasoa Hatao veloma farany eny amin�ny Magro
Tonga tao amin�ny tranon�i tompokolahy Mahery na Tianasoa Andriamanandaza Mahery mpanentana teny amin�ny kianjan�ny Finoana Magro Behoririka, niondrika farany teo amin�ny nofo mangatsiakany, ny fianakaviamben�ny mpitolona teny amin�ny kianjan�ny Finoana Magro Behoririka,
Marc Ravalomanana �Hanome aina vao ho anareo aho�
Mitsidika ny faritr�i SAVA indray nanomboka ny alahady teo i Marc Ravalomanana.
Tsy fandriampalemana Tsy vitan�ny basy intsony, hoy ny minisitry ny fiarovana
Nangataka fiaraha-miasa amin�ny mpanao gazety omaly ny minisitry ny fiarovam-pirenena, ny jeneraly Beni Xavier Rasolofonirina
Kolikoly amin�ny fandraisana Mpitsara Mitsipaka ireo tompon�andraikitry ny sekoly ENMG
Resa-be ny momba ny kolikoly sy ny fahafantaran�olona ahafahana miditra ao amin�ny ENMG (Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes) na Sekolim-pirenena fanofanana mpitsara sy mpiraki-draharaha eto Madagasikara, niorina tamin�ny taona 1996.
Baolina kitra teny Ambavahaditokana Nanjaka tanteraka RFB Zamia
Nifarana ny alahady teo rehefa naharitra telo andro ilay fifanintsanana lalao baolina kitra ho an�ireo klioba mpilalao ao amin�ny kaominina Ambavahaditokana tao anatin�ilay hetsika � Challenge ASCA � andiany faharoa.
Samy miaro ny rambony tsy ho tapaka ny samy HVM manoloana ilay raharaha kolikoly goavana nahasaringotra ilay ramatoa, izay noroahin�ny fanjakana Maorisianina nody aty Madagasikara fa tsy navela hialokaloka tany intsony.
Fanabeazana Tsy manan-danja eo amin�ny fiarahamonina Malagasy
Azo hazavaina amin�ny antony telo ny tsy nahatraran�i Madagasikara ny Tanjon�ny taona arivo fahatelo, hoy ny mpandrindra nasionalin�ny CONAMEPT (Coalition Nationale de Madagascar pour l�Education Pour Tous) Huguette Rakotoarivony nandritra ny fanokafana ny SMA (Semaine Mondiale d�Action pour l�Education) teny Anosy omaly.
Aretina NOMA Mamono ankizy hatramin�ny 90.000 isan-taona
Aretina tsy dia be mpahalala firy nefa mamono ankizy 80.000 ka hatramin�ny 90.000 isan-taona maneran-tany ny Noma raha ny tarehimarika navoakan�ny sampandraharahan�ny firenena mikambana misahana ny fahasalamana.